जाडो बढेसँगै उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ ! - Subhay Postजाडो बढेसँगै उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ ! - Subhay Post
सुभाय् संवाददाताDecember 30, 2019 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं / जाडो बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा ठाउँ ठाउँमा निश्चित समयका लागि बिजुली गइरहेको छ । यसलाई उपत्यकावासीले अघोषित लोडसेडिङ पो हो कि भनेर आशंका गर्न थालेका छन् । काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं १८की पूर्णिमा बज्राचार्य भन्नुहुन्छ ” केही दिनदेखि साँझ पर्नासाथ बत्ती गइरहेको छ ।खै लोडसेडिङ हो कि के हो!”
बसन्तपुरमा पसल गरि बसेका रबिन्द्र महर्जन भन्छ्न् “झन्दै इनभर्टर हटाउन लागेको अहिले काम आयो । ” बत्ती गएको बेलामा पनि अफ्नो पसल झलमल हुँदा उनमा प्रसन्नता छ । “लोडसेडिङ भयो भने त गार्‍हो पर्छ अब” उनी चिन्तित पनि छन् ” खै कुलमानलाई हटाउने खेल सुरु भएको भन्छन्!”
देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सफल प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङप्रति उपभोक्ताको अपार विश्वास रहेको छ । उनी हटाइए फेरि कमिसनको चक्करमा लोडसेडिङ हुनसक्ने आशंका गरे धेरैले ।
पाटन गाबहालका एक उपभोक्ताले भने ” खै कुलमानजी कता जानुभएको हो बत्ती गएर हैरान भो । कतै लोडसेडिङ नैं त भैरहेको त छैन !”
भिन्न -भिन्न स्थानमा समय समयमा बत्ती जान थालेपछि उपत्यकाका उपभोक्ताहरुले यसलाई अघोषित लोडसेडिङ कै रुप हो समेत भन्न थालेका छन् । उता बिद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ” कुनै किसिमको लोडसेडिङ भएको छैन ।कतै कतै मेन लाइनमा समस्या आएका कारण मर्मत कार्य हुँदा बत्ती गइहाल्छ नि!”
तर उपभोक्ता सशंकित छ्न् ।